N'agbanyeghị ụdị ozi izi ozi ị na-eme, ị ga-enye usoro maka onye debanyere aha ịbanye na ozi ndị ahụ. Imirikiti mba na amụma azụmaahịa na-akwado ụdị ụfọdụ iwu mgbochi spam, ya mere idekọ isi mmalite na omume nke omume dị oke egwu. Ndị a bụ usoro:
Nwepu Otu - Nke a bụ ahụkarị usoro maka ozi email na ederede opt-ins. Onye debanyere aha ahụ debanyere aha na saịtị ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-ebubata ya na ikpo okwu izi ozi. Uru otu opt-in dị na mfe ya, achọghị ka mmekọrịta ọzọ. Ọdịda nke nwepu aha otu bụ na ụdị gị nwere ike ịdabere na adreesị ọnyà spam na-akpaghị aka na ndepụta gị. Nwere ike ịchọta ozi ịntanetị gị egbochiri n'okporo ụzọ. Uru otu opt-in bụ na ndị ọrụ na-apụkarị maka ndenye aha mana ha agaghị eme ihe ọzọ site na iji ụzọ nnabata abụọ.
Nwepu aha otu na nkwenye - Nke a bụ usoro kachasị mma maka ndenye aha nnabata ozi ma na-elegharakarị anya. Ozi nnabata mara mma nke na-egosi na onye debanyere aha abanyela ma setịpụ atụmanya banyere oge a ga-eziga ozi yana uru ha ga-eweta onye debanyere aha bụ atụmatụ dị ukwuu.
Ugboro abụọ Nwepu-Na - All nyiwe ozi nyiwe chọrọ ka ị jiri usoro a n'ihi na ọ na-ebelata ihe egwu ọ bụla nke mkpesa spam. Onye debanyere aha ya na-abanye na otu ụdị, mbubata, ma ọ bụ ozi ederede. Nke ahụ na-esozi ozi ozigbo iji kwado opt-in. Ọ bụrụ na ọ bụ email, ha ga-pịa njikọ dị na email ahụ. Ọ bụrụ na ọ bụ ozi ederede, ha ga-azaghachi nkwenye na ha na ịbanye.